Archives des Fivondronana Eokaristikan'ny Tanora | Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Étiqueté : Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora
Ny 01 Septambra ka hatramin’ny 04 Oktobra 2020 dia manasa antsika ny Papa Fransoa hiaina vanim-potoana iray atao hoe « SAISON DE LA CREATION » LOHATAONAN’NY FAHARIANA. Kristianina aman-tapitrisany no efa mankalaza io iray...
Fifaninana hira faneva mandritra ny taon-jôbilin’ny AFAFI-FET
Mikarakara fifaninanana hira faneva ny foibe nasiônaly AFAFI-FET ho fankalazana ny faha 100 taona niorenan’ny FET, faha 170 taonan’ny AFAFI ary ny faha 95 taonan’ny FET Madagasikara. And 1 : Ny vontoatin’ny tononkira dia...
AFAFI-FET, sehatra amaliana ny antso maha iraka
Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana ( na Aina ny Fivavahana teo aloha) no fototra sy fiandohana nipoiran’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora. Izy no loharano anovozany hery hoentina mamakivaky ny fiainana. Aina sy Famonjena ny...
Vavaky ny taon-jaobily faha 100 taonan’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora
Zato taona ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ! Nosokafana ny 22 jona teo ny fankalazana ary hofaranana any Rôma amin’ny taona ho avy. Ho fanomanana ny fihaonana any Rôma (4 ka hatramin’ny 10 aogositra) ary...
Hafatra fanokafana ny fankalazana ny taon-jobily faha 100 taonan’ny FET
Ry namana isany, Ny FET dia miaina amim-pirahalahiana miaraka amin’I Jesoa. Hatrany am-boalohany dia efa nifidy namana I Jesoa ary nanasa azy ireo mba hiara-dalana Aminy teo amin’ny fiainany andavanandro sy tamin’ny iraka fitoriana...